Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee James Maddison Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Madder". Anyị James Maddison Childhood Akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Akụkọ na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ otu n'ime ndị Bekee kasị mma na-awakpo ndị ọgbọ nke ọgbọ ya. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle James Maddison Biography bụ nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
James Maddison Child Story Story Na - Ndụ mbido
A mụrụ James Daniel Maddison na 23 nke ụbọchị nke ọnwa 1996 gaa nne ya, Una Maddison na nna, Gary Maddison na Coventry, England. A mụrụ James dịka nwa mbụ na nwa ya na nne na nna ya, bụ Una na Gary.
James Maddison si:
N'adịghị ka nkwenkwe a ma ama, James Maddison sitere na Republic of Ireland site n'aka otu nne na nna ochie ya bụ ndị Irish.
Maddison tolitere na nwanne ya nwoke, ya onwe ya bụ site na ezinụlọ dị n'etiti. Nke a bụ tupu usoro ịgba chaa chaa wuliri ezinụlọ ya elu. N'oge ahụ, ọ nwere ezin ul o ezin ul o na-enwek or ita n 'ul o nke nwere nd i na-akwado Manchester United tinyere Jems n'onwe ya. N'okpuru ebe a bụ otu ihe ngosi vidio nke gosipụtara Maddison na-ejide Manchester United jersey mgbe ọ na-egwu egwuregwu mgbe ọ bụ nwata.
Otú o si daa n'egwuregwu ahụ:
Ezinụlọ ezinụlọ James Maddison dị nanị minit abụọ site n'aka Alan Higgs Center nke bụ ụlọ Coventry City Football Academy.
Ọbịbịa a dị nso ghọrọ ihe mere Maddison ji enwe mmasị na ịghọ ọkachamara nke ọ na-ahụtụbeghị dị ka ihe efu efu.
James Maddison Child Story Story Na - Ọrụ mmalite
Football n'enweghị obi abụọ magburu onwe ya na-eto eto bụ Maddison pụọ na nhọrọ ndị ọzọ na-adịghị mma ọ gaara eme mgbe ọ bụ nwatakịrị. Ọ malitere site na ndị nne na nna debanyere aha ya dị ka onye na-amụ akwụkwọ tupu ọ ka nọ na Richard Lee Primary School.
Oge afọ agụmakwụkwọ Maddison nyeere ya aka inwe ntọala football dị mma nke na-emesị kwụọ ụgwọ ya kpamkpam. Ọ bụ n'etiti ndị ọzọ na-agba ụkwụ na-eto eto na-eji mgbede (mgbe oge ụlọ akwụkwọ) na-egwu bọl, nanị egwuregwu ha hụrụ n'anya. N'okpuru ebe a bụ otu ihe ngosi vidio nke ọzụzụ nke agụmakwụkwọ nke Maddison nke mere na March 2004.
Early Life na Coventry Academy:
Maddison so n'atụka kacha nta nke gafere akwụkwọ ule mmụta nke mere ka ọ debanye aha na nwa akwụkwọ Coventry n'oge 9. Nke a bụ oge nne na nna ya gbanwere ụlọ akwụkwọ ya. Maddison n'oge a gara ụlọ akwụkwọ Caludon Castle.
Ndụ na agụmakwụkwọ dị ụtọ, ma Maddison aghaghị ịchụ ọtụtụ àjà n'oge na-adịghị anya. Ọ dị ngwa ịrịgo ya site n'onye kasị nta na nwa obere nwa akwụkwọ kachasị mma na agụmakwụkwọ ya. Ọganihu dị otú a sitere na ịrụsi ọrụ ike nke mere ka onyinye nweta site na ọrụ ya maka itinye aka na egwuregwu asọmpi. Hụ ihe ngosi vidiyo n'okpuru;
James Maddison Child Story Story Na - Ụzọ Ebube
James Maddison mgbe ọ dị afọ iri na ụma malitere igosi ezi okwu nke onye na-egwu egwu egwu na onye na-egwu egwu maka ìgwè ndị Coventry. N'agbanyeghị na ọ bụ obere, Maddison ghọrọ Gosi-Nwa onye ga-anapụta mgbe ọ bụla a na-akwado ya iji mepụta ihe mgbaru ọsọ. Nke a mere ka o nye No: 10 jersey.
"Ee e: ọrụ 10 nyeere m aka ịmalite inwe àgwà m n'ihi na etiti ụmụ amaala buru ibu ma na-agba egwu na-agbachitere ndị na-emegide ha" ka Maddison na-ekwu.
N'okpuru ebe a bụ ihe ngosi vidiyo nke James Maddison na mmalite ihe mgbaru ọsọ na ọkachamara ntọala.
Ịghọ Nchịkọta Mbụ:
James Maddison dị ka TheGuardian otu mgbe kwetara na ọ na-eme ihe Philippe Coutinho egwuregwu n'ime onwe ya. Nke Maddison: Arụ ọrụ 10 hụrụ ya na ọ bụghị nanị ịmepụta onye na-achọ ịchọta na ịchọta trophies. Chọta n'okpuru, otu ihe ngosi vidiyo.
James Maddison kwụsịrị ọrụ ntorobịa ya dị ka otu n'ime ndị kachasị egwu na ndị ọkachamara na ọgbọ Coventry. N'ihi ikike o nwere maka akara ma mepụta ihe mgbaru ọsọ, e goro ya ka o jiri egwu egwuregwu Cage Football ebe ọ na-atụghị anya ya dị ka ọ dị na mbụ.
James Maddison Child Story Story Na - Bilie na-ewu ewu
Oge 2013-2014 hụrụ Maddison na-esonye n'òtù ndị mbụ na Coventry ebe ọ nọgidere na-enwu gbaa.
Na Jenụwarị 2016, ọ bụ ezie na ọ bụ na nke atọ nke Bekee football (Njikọ Otu), ndị isi nke Premier League meriri Maddison dị ukwuu na Liverpool na-achọsi ike ịzụta ya. Otú ọ dị, o chere na oge erughị ya ka ọ kpọọ egwuregwu bọlbụ elu.
Maddison kpebiri ịkwaga Norwich ka ọ nọrọ nso na ezinụlọ ya. N'ọnwa ndị na-esonụ, ọrụ ya maka otu òtù egwuregwu ya hụrụ na ọ gụnyere ya England n'okpuru 21 otu egwuregwu na March 2016.
Mgbe 2018 / 2019 na-amalite nke ọma na Leicester na ihe mgbaru ọsọ nke Njikọ Premier, onye njikwa England ugbu a Gareth Southgate a manyere ịkpọ James Maddison ọnụ na star English Jadon Sancho na akwa otu na October 2018. Nke a mara oke egwu nrọ nke Maddison nke ịgba egwu maka mba ya abụghịzi efu efu. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu bụ akụkọ ihe mere eme.
James Maddison Child Story Story Na - Ndụ mmekọrịta
Mmekọrịta ndị a zoro ezo nke James Maddison bụ otu nke na-ahapụ nyocha anya ọha na eze nanị n'ihi na ịhụnanya ịhụnanya ya dị nnọọ iche ma bụrụ nke na-enweghị onwe ya.
Eziokwu bu, James Maddison choro ilekwasi anya oru ya ma choo izere ihe obula na ndu ya. Eziokwu a na-eme ka o siere anyị ike ịnweta eziokwu banyere ndụ ịhụnanya ya na akụkọ ihe mere eme ya.
James Maddison Child Story Story Na - Ndụ nke Onye
Ịmata James Maddison ndụ onwe gị ga-enyere gị aka ịchọta ya zuru ezu.
Maddison bụ onye na-achọsi ike ma dị ike, nke nwere uche na-emeghe ọnụ ọchị. Ọnụ ọkụ n'obi ya maka ndụ na nke kachasị mkpa ezinụlọ ya enweghi oke. A na-ahụ nke a n'àgwà ọchị na ọchị ya nye ndị ọ hụrụ n'anya.
James Maddison Child Story Story Na - Ndụ Ezinụlọ
Maddison nwere nkwado nkwado siri ike site na nzụlite ezinụlọ ya nke oge ya. Onye ọ bụla enyerela ya aka gụnyere nna ya ọ hụrụ n'anya Gary Maddison dị ka a hụrụ na vidiyo nke ntorobịa ya n'okpuru.
N'agbanyeghị nkwado ahụ, Jems maara na ọ ga-ewute ya ma gosipụta ihe ọ ga-eme na pitch. N'agbanyeghi na ya na papa ya na nna ya n'ekpere n'egwuregwu football, a maara Maddison dị nso na mama ya dịka e gosipụtara site na mgbasaozi mgbasa ozi.
Ma nne ya na nna ya ka na-ekiri ndụ, nwa ha nwoke dum na oge zuru ezu, ọ gaghị echekwa njem na ala mba na ngwụsị izu na ụbọchị izu iji hụ James ka ọ na-eme ihe ọ kachasị mma na egwuregwu.
James Maddison Child Story Story Na - Eziokwu efu
James Maddison nwere ogwe aka ya jupụtara na tattoos bụ nke a na-adighi mmasị maka ejiji. Ntucha niile na ogwe aka aka ekpe ya pụrụ iche.
Maddison adọrọla egbu egbu iji kọwaa ihe ndị gbasara ezinụlọ ya nke nwere nnukwu akụkụ na - agụ; "Ịhụnanya nke ezinụlọ bụ ngọzi kasịnụ nke ndụ. "
Ọzọkwa, oge ahụ pụrụ iche nke ọkachamara ọkachamara ya bụ akara aka na ogwe aka ya. Ya ụbọchị nrọ ya nke ịghọ ndị ọkachamara ọkachamara n'ikpeazụ mezuru.
James Maddison jidere ya n'ọgba aghara banyere ya, ndị enyi ya na ụfọdụ ndị bịara abịa. Ọ na-etu ọnụ na ndị ọbịbịa na-enwe ego £ 7,000-a-izu tupu enyi ya ebubo wakpo otu n'ime ndị ikom ahụ n'ihi na ọ maghị na Maddison dịka ama ama. Mgbe a gwara ya ka ọ kọọrọ ya ihe ahụ merenụ, otu n'ime ndị ahụ kwuru na ọ sịrị;
"O kwuru na ọ na-enweta £ 7,000 kwa izu. O kwuru na ọ na-enweta ihe karịrị otu ọnwa karịa ka anyị na-eme n'ime otu afọ. Ọ jụrụ m ihe m mere. O kwuru na akpụkpọ ụkwụ ya dị oké ọnụ ahịa karịa uwe anyị. "
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ James James Maddison Childhood Akụkọ tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị agbanweela: Machị 6, 2019
Bọchị agbanweela: Septemba 30, 2019